Cloudya: NFON को सर्वश्रेष्ठ क्लाउड फोन प्रणाली | ग्याजेट समाचार
क्लाउड संचारले बजारको उपस्थिति हासिल गर्दैछ। ती कम्पनीहरु को लागी एक महान अवसर को रूप मा प्रस्तुत गरीएको छ, संचारको डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा। यस क्षेत्रमा त्यहाँ एक कम्पनी छ कि बाँकी भन्दा माथि खडा छ, जुन NFON हो। यो कम्पनी क्लाउडयाको लागि जिम्मेवार छ, क्लाउड टेलिफोनी प्रणाली। यसको लागि धन्यबाद, कम्पनीको संचारले क्रान्तिको सामना गर्यो।
क्लाउडिया विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय संचार सुधार गर्न खोज्दछ। विशेष गरी ठूला अपरेटरहरुबाट स्वतन्त्रताको तथ्य केहि हो जुन धेरै कम्पनीहरूमा ठूलो चासोको हुन सक्छ। त्यसकारण, तल हामी तपाइँलाई यस एनएफओन प्रस्ताव र उनीहरूले के प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै कुरा बताउनेछौं।
1 के हो र कसरी क्लाउडियाले काम गर्दछ?
2 क्लाउडयामा भूमिकाहरू
3 NFON क्लाउड टेलिफोनी
4 कसरी क्लाउडिया पहुँच गर्ने
के हो र कसरी क्लाउडियाले काम गर्दछ?
यो क्लाउड टेलिफोनी प्रणाली हो, जुन यो कम्पनी मा एक सम्बन्ध संचार मुक्त गर्न अनुमति दिन्छ। क्लाउडायाले प्रदान गर्ने ठूलो फाइदाहरूमध्ये यो एक हो कि यो सबै प्रकारका उपकरणहरू, जस्तै पीसी, ल्यापटप वा स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस तरीकाले कलहरू वा भिडियो कलहरू सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो केवल चीज मात्र होइन जुन यस सेवालाई धन्यवाद गर्न सकिन्छ।
यसले तपाईंलाई आफ्नो कार्यालयको विस्तारको व्यावसायिक कार्यक्षमताहरू सँधै तपाईंसँग, तपाईंको जेबमा राख्न अनुमति दिन्छ। यो सेवाका लागि धन्यवाद यो सम्भव छ डिजिटल फ्याक्स प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईंको स्मार्टफोनमा, तपाईं जहाँ भए पनि। थप रूपमा, उनीहरूसँग भर्चुअल वास्तविकतामा आधारित भर्चुअल कन्फरेन्स रूमहरू छन्। तिनीहरू यात्रा लागतहरू बचत गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ र यस तरीकाले सीधा कम्प्यूटरको ब्राउजरबाट बैठक।
यो सबै सम्भव प्रयोग गर्न को लागी ईन्टरफेस को लागी हो। क्लाउडिया यस्तो तरीकाले डिजाइन गरिएको छ कि कम्पनीमा सबै कामदारहरूले यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्दछन्। प्रत्येक कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्न अद्वितीय फोन नम्बर र इनबक्स प्रयोग गरिन्छ। यो उल्लेखनीय कुनै पनि श्रमिक को लागी उपयोग को सुविधा प्रदान गर्दछ।
अघिल्लो सेक्सनमा, यसको केहि कार्यहरू पहिले नै उल्लेख गरिसकिएको छ, यद्यपि NFON आफैले सबैaलाई उपलब्ध गराउँदछ कार्यहरूको पूर्ण सूची त्यो क्लाउडियामा समावेश छ, जुन हो धेरै कम्पनीहरूमा चासो उत्पन्न गर्न। यो उपलब्ध कार्यहरूको वर्तमान सूची हो:
क्लाउड फोन प्रणाली: स्रोत-आधारित कल अग्रेषण, राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कल, भर्चुअल फ्याक्स
कल व्यवस्थापन: कल ट्रान्सफर, IVR, CLIP, CLIR, कल मार्ग, भ्वाइसमेल
उपकरण एकीकरण: फोन मेनूहरू
अनुप्रयोग प्याकेज: मध्यम कन्फरेन्स कल, स्मार्टफोन एकीकरण
दूरसञ्चार अनुप्रयोगहरू: CTI
थप सफ्टवेयर: अपरेटर प्यानेल
यसले एक राम्रो प्रभाव दिन्छ धेरै उपकरण र विकल्पहरू उपलब्ध छन् यस सेवामा। यस तरीकाले कम्पनीको संचार सकरात्मक तरीकाले रूपान्तरण हुनेछ। अधिक स्वतन्त्रता, प्रयोग गर्न सजिलो र अधिक संभावनाहरू, जुन सबै समयमा उत्तम संचारलाई अनुमति दिन्छ।
यी NFON र Cloudya ले प्रस्ताव गरेका केही सुविधाहरू मात्र हुन्। त्यहाँ कुल १ 150० प्रकार्यहरू उपलब्ध छन्, तपाईं यो लिंकमा के देख्न सक्नुहुन्छ?। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूका लागि दर्जी समाधानहरू हुन्, जस्तै होटलहरू, अस्पतालहरू, बैंकहरू, व्यवसाय केन्द्रहरू र अधिक बढि। तिनीहरू सबै प्रकारका व्यवसायमा उत्तम रूपले अनुकूलन गर्दछन्।
NFON क्लाउड टेलिफोनी
धेरै विज्ञहरू पहिले नै सञ्चारमा क्लाउड टेलिफोनिलाई भविष्यको रूपमा हेर्दछन्। वर्तमानमा हामी हेर्दछौं कि यसले कसरी बजारमा उपस्थिति हासिल गरिरहेको छ, विशेष गरी व्यापारको क्षेत्रमा, जहाँ एक डिजिटल रूपान्तरण भइरहेको छ। क्लाउड टेलिफोनीमा शर्त लगाउँदा कम्पनीलाई ठूलो अपरेटरहरूमा निर्भर हुन अनुमति दिँदछ। यो केहि गर्न सक्ने छ मानौं कि महत्वपूर्ण लागत बचत कुनै पनि कम्पनी को लागी। थप रूपमा, क्लाउडया जस्ता सेवाहरूमा शर्त लगाएर, तपाईं एक विशेष र व्यावसायिक सेवा पाउनुहुनेछ, जुन कम्पनीमा निर्भर रहन धेरै व्यक्तिगत ब्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्दछ।
क्लाउड टेलिफोनीको एउटा कुञ्जी यो हो कि यो एक भरपर्दो प्रविधि हो जसले राम्रोसँग काम गर्दछ र कम्पनीलाई राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। जस्तो राम्रो संचार सबै समयमा प्रदान गरिएको छ, दुवै आन्तरिक र बाह्य। त्यसैले यो सम्पर्क मा रहन र ग्राहकहरु को लागी उपलब्ध हुनेछ, केहि बिन्दु मा अवरोध बिना। यसको एक लाभ यो छ कि साना कम्पनीहरूमा पनि, यसले स्विचबोर्ड लिन अनुमति दिन्छ, ग्राहक वा सम्भावित ग्राहकहरूबाट कलहरूको जवाफ दिन।
तपाईले पनि गर्नु पर्छ यो प्रस्ताव लचकता हाइलाइटकम लागतका साथ अफिस सार्ने अवस्थामा थप यस तरीकाले गर्न सजिलो छ। यो भर्चुअल स्विचबोर्डमा पहुँच विश्वमा कहिँ पनि दिइन्छ, यस्तो काम जुन कामदारहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जसले आफ्नो कामको प्रदर्शनमा धेरै यात्रा गर्नुपर्दछ। पहुँचको तरीका पनि सरल छ, किनकि तपाईंले उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ।
NFON यस बजार क्षेत्रमा प्रीमियम समाधानको रूपमा स्थित छ। गुणस्तरको ग्यारेन्टी, राम्रो सेवा प्रदान गर्दै, बजारमा पैसाको लागि उत्तम मूल्यको साथ। थप रूपमा, उनीहरूले लागत अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ, किनकि समान भर्चुअल स्विचबोर्डबाट र ग्राहकहरू बीचको आन्तरिक कलहरू नि: शुल्क छन्। केहि कम्पनिहरु लाई महत्वपूर्ण बचत गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
कसरी क्लाउडिया पहुँच गर्ने
ती कम्पनीहरूको लागि जुन यस बारे अधिक जान्न चाहन्छन् क्लाउडिया, तिनीहरू कम्पनीको वेबसाइटमा जान सक्दछन्, लिंकमा जुन हामीले भर्खर तपाईंलाई छोड्यौं। क्लाउडयामा समावेश गरिएका सेवाहरूको बारेमा यहाँ सबै जानकारीहरू उपलब्ध छन्, सम्भव हुनुको साथै यो तपाईको कम्पनीको प्रकारको आधारमा हुने फाइदाहरू देख्न सक्दछ। त्यसोभए तपाईले एक धेरै सरल तरीकाले जान्न सक्नुहुन्छ कि यसले संचारको क्षेत्रमा कम्पनीलाई कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ, वा उनीहरूमा शर्त लगाउने लागत बचतमा।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ NFON सीधा तपाइँको वेबसाइट को माध्यम बाट, क्लाउड्याका बारे थप जानकारीका लागि, वा तिनीहरूका सेवाहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्न चाहेको अवस्थामा। तपाईंको टोली एक यो सेवाको साथ सुरु हुने प्रक्रियाको माध्यमबाट तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्ने हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Cloudya: उत्तम क्लाउड फोन प्रणाली